Hlola iCanberra, Australia - World Tourism Portal
Hlola iCanberra, e-Australia
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Canberra, Australia.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeCanberra
Bukela ividiyo ngeCanberra
Hlola iCanberra, i-caidolobha lasePital Australia, idolobha elihleliwe elinamatshe ezikhumbuzo zikazwelonke, iminyuziyamu nemipheme eyakhelwe echibini elikhulu lokwenziwa. Njengenhloko-dolobha yasehlathini, iCanberra nayo iyindawo enhle yokujabulela ngaphandle, ngamabhayisekili amahle kakhulu, izingadi, amapaki, izihlahla zemigwaqo ehlathini nezindawo zemvelo.
ICanberra yasungulwa e1913 njengenhloko-dolobha yezwe lase-Australia elisanda kufakwa enhlanganweni.
ILake Burley Griffin ihlukanisa i-Canberra ephakathi. Indawo ephakathi yezitolo nezentengiselwano, ebizwa nge- "Civic", isohlangothini olusenyakatho kanti unxantathu wePhalamende nendawo yenxusa ungaseningizimu. Izikhungo zikazwelonke zihlukaniswe ngokufanayo, izibonelo ziba yiNational Museum yase-Australia kanye neSikhumbuzo seMpi yase-Australia ohlangothini olusenyakatho kanye neThala Lezincwadi Kazwelonke kanye negalari Yesizwe Yase-Australia ohlangothini oluseningizimu.
AmaCanberrans ewonke angabantu abangeneka kalula, abanobungane futhi ababekezelayo abanamazinga aphezulu ezemfundo nehola imali kuwo Australia.
Isikhumulo sezindiza i-Canberra International Airport sisebenza kahle ngezindiza ezivela kwamanye amadolobha amakhulu ase-Australia.
Ngenkathi iCanberra iyonke ingahambi ngokwanoma yimiphi imigomo, ezinye izingxenye zayo, kufaka phakathi i-Civic kanye nengxenye esogwini olusenyakatho yeLake Burley Griffin, kanye nokubuka ogwini oluseningizimu yeLake Burley Griffin, kungenzeka bamba ngezinyawo.
Isikhungo SaseCanberra Antiques. I-10AM - I-5PM izinsuku eziyisikhombisa ku-37 Townsville Street, Fyshwick. Abathengisi abanobuchwepheshe abaphezulu kweshumi nambili, bobabili nabasendaweni abahlukahlukene, banikela ngefenisha ephezulu yasendulo neye-retro, okokugqoka okumnandi kwe-vintage, izindwangu zemvini, ezempi, ukubhula ngezinombolo, ukubumba, amathuluzi wokufaka wezinto zokuhlobisa we-vintage nezesekeli, ogesi, isiliva, ingilazi yobuciko, ikhwalithi ephezulu izinto ze-a-brac neziklami. Yethulwe kahle ngomculo omnandi odlalwa kanye ne-vibe enhle kuyo yonke.
Imakethe yaseJamison - njalo ngeSonto eduze nesikhungo saseJamison, eBelconnen. Izitolo ezintsha zokukhiqiza nemakethe yezikuni. Woza uzothola ishibhile sakho. Amarekhodi e-Vinyl, okokugqoka kwesandla sesibili, ifenisha, i-bric-a-brac.
Imakethe Yamabhasi amadala, njalo ngamaSonto. Ubuciko nezobuciko - zonke zisezingeni eliphakeme. Izitolo zokudla, kufaka phakathi umkhiqizo omusha nomculo obukhoma. Izinsuku zezindikimba njengokudla kwakwamanye amazwe okubanjwa ngezikhathi ezithile.
I-Tuggeranong Market - NgeSonto lokuqala lazo zonke izinyanga eTuggeranong Homestead ebheke ngasezitolo zakwaCalwell. Izitolo eziningi, zithengisa izinto ezimangazayo.
I-Trash and Treasure Market eWoden isingathwa yiRotary futhi ibanjwa njalo ngeSonto ekuseni. Lindela isikhwama esixubekile sezincwadi, izitshalo, kanye nomjondolo wekhaya ongasho lutho.
IFyshwick Market, Dalby St (Cnr Mildura St) Fyshwick - Umkhiqizo omusha, kubandakanya izithelo, imifino, inyama nenhlanzi. Kuvulwa uLwesine kuya ngeSonto. Imini yangeSonto yisikhathi esihle sokuthatha ezinye zezimali.
I-Belconnen Market, iLathlain St, iBelconnen (kude neBenjamin Way), i-ACT. Amamaki avuliwe kusuka ku-8: 00AM kuya ku-6: 00PM ngoLwesithathu kuya ngeSonto. Ezinye izitolo zivula izinsuku ze-7 ngesonto.
IMakethe Yabalimi BaseNhloko-dolobha. I-EPIC (Well Station Road eduzane neFederal Highway, North Canberra) - NgoMgqibelo ekuseni 8AM iya e11AM. Abathengisi bangabakhiqizi. Izitolo zonke zihlobene nokudla.
Imakethe Yabalimi Yaseningizimu. I-Woden CIT (eyake yakuba yiWoden High School) (Isitaladi i-Ainsworth ngaseHindmarsh Drive, Phillip) - ngeSonto ekuseni i-9AM iya e-12PM. Abathengisi bangabakhiqizi. Izitolo zonke zihlobene nokudla.
IGolden Creek Village, iBarton Highway, iGungahlin.Lesi 'sigodi' sezitolo ezikhethekile, izinto ezikhangayo, amahhotela (iziphuzo), izitolo zekhofi, i-reptile 'yendabuko', indawo ebiyelwe uvemvane, kanye nezinto zasensimini, eqenjini elihlukile amabhilidi e strip mayelana ne1km ubude. Abantu bendawo nezivakashi ngokufanayo basebenzisa le ndawo, ikakhulukazi ngezimpelasonto.
ICanberra Center iyindawo enxanxathela enkulu yezitolo eCivic, emboza ingxenye enkulu yesifunda seCanberra. Inezitolo zomnyango, ihholo lokudla kanye nama-eateries, izitolo ezikhethekile zabantu abadala kanye nezingane zemfashini zombili i-upmarket neziyisisekelo. Kukhona nezinto ezisebenza ngogesi, izincwadi, ama-CD, izikhumbuzo kanye nemikhiqizo eyenziwe e-Australia.
ICity Walk yindawo engaphandle yezitolo e-Civic. Kukhona ukudla i-alfresco nokuthenga.
IBelconnen Mall yigama lesikhungo esithengiwe sokuthenga esiphethwe yiWestfield esenkabeni yeBelconnen Town Center enyakatho. Yize ingenazo izitolo eziningi zokugqoka, ifaka isitolo somnyango we-'Myer 'kanye ne'K-mart', kanye nezitolo ezinkulu ezintathu kanye nenkantolo yokudla. Itholakala ngaphezulu kwamazinga amathathu.
IWoden Westfield kanye neTuggeranong Hyperdome yizindawo ezimbili ezinkulu ezivalekile zokuthenga eningizimu, ezisenkabeni yedolobha laseWoden naseTuggeranong ngokulandelana. I-Woden Plaza ifaka isitolo somnyango 'seDavid Jones', 'BIG W', nezitolo ezinkulu ezimbili, kanye nezitolo ezikhethekile ze-200 kanye nenkantolo yokudla. I-Tuggeranong Hyperdome (iningizimu eseningizimu) ifaka i-'K-mart' ne-'Target', kanye nezitolo ezinkulu kanye nenkantolo yokudla kanye nezitolo zokugqoka ezikhethekile.
IFyshwick iyindawo engaphansi kokuthenga izinto zasendlini nezinto zobuchwepheshe, kanye nefenisha kanye nezinto zasekhaya. Futhi yisifunda saseCanberra 'red-light'. Iningi lezitolo zakudala zeCanberra nazo zingatholakala lapha. UFyshwick manje une-DFO - Isikhungo Esiqondile Sokuqondisa.
ILonsdale St eBraddon (eduzane neCivic) inezindawo ezimbalwa zokuphumula, ezigxila amalebula wokugqoka azimele nezinye izinto zomqambi.
IManuka kungenye indawo enamakhefu nezindawo zokudlela. AmaMiller of Manuka boutique athengisa imikhiqizo ehamba phambili yabesifazane abanjengoMax Mara nabanye. Okokugqoka okungabizi kakhulu kwabesifazane zama iWitchery. Abasebenza izincwadi bazokwenza kahle ukubheka isitolo sezincwadi sePhepha.
IKingston enye futhi indawo yokuthenga nezindawo zokudlela ezingekude neManuka.
Okuningi okuhlangenwe nakho okujabulisa kakhulu ukuthenga ezikhungweni zikazwelonke, cishe zonke ezinezitolo ezikhethekile ngaphakathi. Igalari Yesizwe inoluhlu olubabazekayo lwezincwadi zobuciko, zombili zaphesheya nezomdabu. Kanjalo ne-National Library, i-Questacon Science Museum, i-War Memorial, iMnyuziyamu kaZwelonke e-Acton, iFilimu noMsindo Archive, njalonjalo - uma ufuna izinto ezihlukile zase-Australia, lezi yizindawo okufanele uhambe kuzo.
ICanberra inama-eater amaningi amahle, kepha qaphela - amaningi azovalwa ngamaSonto. Zonke izakhiwo zomphakathi eCanberra azibhemi mahhala.
Imigoqo eminingi neklabhu yaseCanberra izovalwa ngeSonto ebusuku nasekuqalekeni kwesonto. I-Civic ingahle ibonakale iyidolobha elinesipoki kodwa kunezindawo ezinjengeBunda Street lapho uzohlala uthola okuthile okwenzekayo.
Hlola iCanberra njengoba iyidolobha eliphephe kakhulu futhi ithokozela elinye lamazinga obugebengu aphansi kakhulu kulo lonke elase-Australia. Kodwa-ke, qaphela, ikakhulukazi lapho kushintshana ngebhasi, lapho enye intsha ingahle ithambekele khona.